संचारमन्त्रीलाइ प्रश्न सोधेकै भरमा ठाडो आदेशमा कार्यक्रम ‘सिधा प्रश्न ?’ भयो बन्द (भिडियो) | suryakhabar.com
Home पु.समाचार समाचार संचारमन्त्रीलाइ प्रश्न सोधेकै भरमा ठाडो आदेशमा कार्यक्रम ‘सिधा प्रश्न ?’ भयो बन्द (भिडियो)
on: ३० जेष्ठ २०७५, बुधबार १२:३० In: समाचार, सूचना प्रविधिTags: No Comments
काठमाडौं । नेपालको सरकारी टेलिभिजन नेपाल टेलिभिजनबाट विगत १२ वर्षदेखि प्रशारण हुदैँ आएको र नियमित प्रसारणमा रहेको कार्यक्रम “सिधा प्रश्न ?” बन्द गरिएको छ । सञ्चारमन्त्रीको ठाडो आदेशमा उक्त कार्यक्रम बन्द भएको हो ।
सञ्चारमन्त्रीको अन्तर्वार्तापछि उक्त बहस कार्यक्रम संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाको ठाडो आदेशमा बन्द भएको छ ।
सञ्चारमन्त्रीको उक्त कार्यको चौतर्फी निन्दा भएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका क्रमममा मन्त्रीको झुट पक्रिएपछि बास्कोटाले कार्यक्रम नै बन्द गर्न ठाडो आदेश दिएका थिए । कार्यक्रम सञ्चाक राजु थापाका अनुसार मन्त्रीकै आदेशमा कार्यक्रम बन्द भएको बताए ।
सञ्चारमन्त्री नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्य समेत हुन् ।
मन्त्री बाँस्कोटासंगको कार्यक्रममा भएको चाहिँ के थियो त ?
मन्त्री – कम्युनिस्टको हुँदा चाहिँ के हुनुपर्ने तपाईँ बताइदिनु त मलाई।
सञ्चालक – तपाईँहरु त दाइजो विरोधी।
मन्त्री – दाइजो भनेर क–कसले राख्या छ ?
सञ्चालक – दाइजो भनेर नभने पनि श्रीमतीको विवाहमा आएको भनेर त तपाईँले राख्नुभा छ ।
मन्त्री – श्रीमतीको विवाहमा आएको रे ?
सञ्चालक – विवाहमा माइती पक्षले दिएको भनेर त तपाईँले राख्नुभा छ।
मन्त्री – कति राख्या छ ?
सञ्चालक – तपाईँले १७ तोला त सुन राख्नुभा छ। ६० तोला चाँदी राख्नुभाछ।
मन्त्री – हो तर श्रीमतीको विवाहमा आएको भनेर मैले राख्या छैन।
सञ्चालक – माइतीबाट
मन्त्री – छैन। तपाईँ झुट बोल्दै हुनुहुन्छ।
सञ्चालक – म तपाईँलाई देखाइदिउँ ?
मन्त्री – मसित झुट बोल्नुपर्दैन। चार पाँच तोला श्रीमतीबाट आए होला। हो रु १७ तोला
सञ्चालक – तपाईँको सम्पति विवरण मसँग छ सर ।
मन्त्री – ठीक छ, ल्याउनुस्। दुनियाँलाई देखाउन राखेको हो।
सञ्चालक – तपाईँको सम्पति विवरणमा ।
मन्त्री – ठीक छ, राख्नुस्।
सञ्चालक – १७ तोला सुन
मन्त्री – हो।
सञ्चालक – र ६० तोला चाँदी चाहिँ
सञ्चालक – विवाहमा दिएको माइतीले भनेर लेख्नुभा छ।
सञ्चालक –अघि हैन भन्नुभो।
मन्त्री – हो दिएको हो। तर सबै दिएको हैन।
मन्त्री वास्कोटाको ठाडो आदेशको भत्सर्ना गर्दै नेपाल प्रेस युनियनले निकालेको विज्ञप्ति यस्तो छः
नेपाल टेलिभिजनमा विगत १२ बर्षदेखि प्रस्तोता राजु थापाले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रम ुसिधा प्रश्नु नेपाल सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्री गोकुल प्रसाद वास्कोटाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा बन्द भएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सरकार नियन्त्रित नेपाल टेलिभिजनमा केहि लोकप्रिय कार्यक्रम मध्ये रहेको थापाकोुसिधा प्रश्नु प्रत्येक शनिवार राती ८ः४५ मा प्रसारण हुँदै आएको थियो। नेपाल टेलिभिजनका समाचार प्रमुखले थापालाई ुसिधा प्रश्नु कार्यक्रम अब प्रसारण नुहने जानकारी मंगलवार गराएका थिए। मन्त्री वास्कोटासँग लिएको अन्तर्वार्ता पछि आफ्नो कार्यक्रम बन्द गर्ने आदेश आएको थापाले जनाएका छन्।
कार्यक्रम वन्द गर्न गरेको ठाडो हस्तक्षेपले नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कमजोर अवस्थामा पुगेको पुष्टी गरेको छ। आवरणमा लोकतन्त्र भएपनि सरकार निरंकुशतातर्फ अघी बढेको यि घटनाहरुले पुष्टी गरेको छ। आम सञ्चारकर्मीको अधिकार रक्षाका लागि समेत क्रियाशिल हुनुपर्ने मन्त्री आफै सञ्चारकर्मीको कार्यक्रम बन्द गर्न निर्देशन दिदै हिड्नुले जो अगुवा उही बाटो । जस्तो भएको छ।
३० जेष्ठ २०७५, बुधबार १२:३०